महिलाको वक्षस्थलबारे रोचक तथ्य, जसले पुरुषको आयु पनि बढ्छ ! onlinedarpan.com
Sunday 3rd of July 2022 / 12:11:37 PM
महिलाको वक्षस्थलबारे रोचक तथ्य, जसले पुरुषको आयु पनि बढ्छ !
एजेन्सी : महिलाको वक्षस्थल पुरुषका लागि आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ । यसले महिलाको सुन्दरतामा पनि निखार ल्याएको हुन्छ । त्यहीँ कारण वक्षस्थललाई सकेसम्म बढि कामूक, कसिला तथा ठूला बनाउन महिलाहरुले विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्
पछिल्ला दिनमा यसका लागि विकसित देशमा स्तन प्रत्यारोपण लगायतका पद्धति समेत निकै चल्तीमा छन् । हामीले यहाँ वक्षस्थल सम्बन्धि केही रोचक तथ्य प्रस्तुत गरेका छौँ, जसका बारेमा स्वयं आम वक्षस्थल धनीहरु बेखबर हुन सक्छन्
विश्वमा सबैभन्दा ठूला स्तन भएकी महिला ब्राजिलकी शेला हर्षे हुन् । उनले सन् २००९ मा स्तनको सर्जरी गराएर केही ग्यालेन सिलिकनको झोल स्तनभित्र खाँदेपछि उनको वक्षस्थल निकै विशाल बनेको छ । उनको वक्षस्थलको आकार ३८ केकेके छ । तर विश्वमा सबैभन्दा ठूला प्राकृतिक वक्षस्थल भएकी महिलाको नाम भने नोमास्टिट्ज हुन् । अमेरिकामा गो टपलेस डट ओराजी नामको महिलावादी एनजिओ छ । यसले केही कुराको विरोध प्रदर्शनका लागि स्तन प्रदर्शनलाई मुख्य अस्त्र बनाउँछ ।
यो एनजिओका महिलाहरुले टपलेस भएर विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन्छन् । रोचक कुरा के छ भने महिलाका दुइवटा स्तन समान आकारका हुँदैनन् । बायाँ स्तनको आकार दायाँ स्तन भन्दा केही ठूलो हुन्छ । तर आकारको अन्तरलाई स्वयं महिलाले पनि पत्ता लगाउन कठीन हुन्छ ।
यसमा लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन की पुरुषको पहिलो नजर महिलाहरुको वक्षस्थलमै पर्छ । महिलाहरुले आफुप्रति तन्नेरीहरुको आँखा कति पार्न सक्छन् भन्ने कुरा उनीहरुको वक्षस्थलको सुन्दरतामा भर पर्छ । अझ रोचक कुरा त के भने एक दिनमा कम्तिमा एक मिनेट महिलाको वक्षस्थलमा आँखा लगाउने पुरुषको आयुमा समेत वृद्धि हुन्छ । यसको कारण पुरुषको मनोविज्ञानमा आउने सकारात्मकता हो ।
ब्रा बनाउने कम्पनी थ्रम्पको एक सर्भेक्षणका अनुसार बेलायती महिलाहरुको वक्षस्थल अन्य युरोपेली महिलाको भन्दा ठूलो छ । युरोपेली महिलामध्ये ठूला वक्षस्थल हुनेमा डेनमार्कका महिला दोश्रो, हल्याण्डका तेश्रो स्थानमा छन् । युरोपमा सबैभन्दा सानो आकारका वक्षस्थल भएका महिला इटालीका छन् ।
स्तनको औषत वजन आधा किलो हुन्छ । दुइवटा स्तनको तौल महिलाको शरीरको कुल तौलको एक प्रतिशत जति हुन्छ । स्तनमा बोसोको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । उमेर बढेसँगै स्तनमा बोसोको अनुपात पनि बढ्छ । पाको उमेरका महिलाको स्तनमा दुध ग्रन्थी सुक्ने भएकाले त्यसको ठाउँ पनि बोसोले लिएको हुन्छ । -दैनिक नेपालको सहयोगमा